“Cristiano Ronaldo ma ahan kan ugu fiican adduunka.” – George Weah – Gool FM
(Italy) 22 Jan 2021. Halyeeyga kooxda AC Milan ee George Weah ayaa aaminsan in Juventus ay wali tahay kooxda ugu cadcad hanashada Horyaalka Talyaaniga, sidoo kale wuxuu sheegay in Cristiano Ronaldo uusan aheyn ciyaaryahanka aduunka ugu fiican.
Xiddigii hore Rossoneri ee George Weah ayaa wareysigiisa wargeyska “La Gazzetta dello Sport” wuxuu kula wadaagay fikirkiisa ku aadan tartanka Horyaalka Talyaaniga.
George Weah ayaa wareysigan uu bixiyay wuxuu ku sheegay:
“Milan waxa ay bilowday waddo cusub oo aad u wanaagsan, Paolo Maldini waa nin weyn, waa saaxiib wanaagsan.”
“Wuxuu ahaa kabtan weyn hadana wuxuu si adag uga shaqeeyaa dhanka maamulka wuxuuna ogyahay waxa ay kooxda u baahan tahay.”
“Inter, Juventus iyo Napoli waxay wali yihiin kuwa si xoogan ula tartamaya Milan, mana garanayo haddii Milan ay ku guuleysan doonto horyaalka, laakiin waxay diirada saari doonaan ilaa dhamaadka.”
Intaas kaddib George Weah ayaa ka hadlay qaab ciyaareedka Zlatan Ibrahimović inkastoo da’adiisu ay ku dhowdahay 40 jir, wuxuuna yiri:
“Ibra waa laacib xoogan kuna kalsoon naftiisa, wuxuu tusaale u yahay ciyaartoyda da’ayarta ah, wuxuuna i soo xasuusiyaa Pietro Bronzini iyo Paolo Maldini waxay ciyaareen isla da’adaan oo kale.”
“Cristiano Ronaldo sidoo kale wuxuu cadeyn u yahay in isku darka shaqada adag iyo xamaasada ay soo saari karto natiijooyin lama filaan ah”.
“Isagu ma ahan ciyaaryahanka adduunka ugufiican, laakiin wuxuu sameeyay tababar badan si uu u noqdo kan ugu fiican, waan la dhacsanahay isaga sababtoo ah wuxuu ahaa mid hooseeya, inastoo uu gaaray guulahan oo dhan, wuxuu u dagaalamay inuu gaaro waxa uu hada yahay.”